Urur Oroma ah ayaa Soomaalida Kililka Ethiopia ku Eedeeyey in ay Duulaan ku soo yihiin. – Xeernews24
3. Februar 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Ururka OFC ( Oromo Federalist Congress) ee ugu xooga badan urarada mucaaradka ah ee ka jira Itoobiya ayaa ka digay natiijada ka dhalan karta wax uu ugu yeedhay duulanka, boobka iyo dilka ay ciidamada Liyu boolisku ka wadaan Oromiya, gaar ahaan, bariga Hararghe, Bale iyo Borena.
Ururka ayaa xusay in xogaha ay helyaan tilmaamayaan in dhibaato xoog leh ay ciidanka gaarka ah ee DDSI u geysteen dad shacab ah oo Oromo ah.
Warbixinta ayaa ku soo beeganatay xilli aad loo hadal-hayo duulamo ay ciidanka Liyugu ku qaadeen tuulooyin ku yaal soohdinta labada maamul kala qaybisa. Waxaa adag in la helo sababta ka danbeysa colaada, laakiin saaxafada taagerta Oromada ayaa sheegtay in xukuumada TPLF, oo ah ta ugu tunka weyn ururka EPRDF, ay ka danbeysa colaada. Wararka saaxafada Oromada ayaa lagu tibaaxay in TPLF dooneyso inay cadawaad ka abuurto labada shacab ee walaalaha ah islamarkaana ku qariso xaalada cakiran ee siyaasadeed ee ka jirta dalka.
OFC ayaa dhankeeda sheegtay in olollaha TPLF yahay inla curyaamiyo Oromada dhaqaale iyo siyaasad ahaan si looga dhigo dad tiro yar oo dhulkoodu kooban yahay. Ururka ayaa masuuliyinta Itoobiya ku sheegay kuwa aan shacabka dan ka lahayn oo samaynaya wax kasta oo ay awooda ku sii haystaan.
Inkastoo aad loo dareemay coladaa ka jirta dhulka soohdint ah, haddana xukuumada EPRDF iyo dawlada Jigjiga ayuu weli afkoodu daboolan yahay oo aan waxba ka sheegin xurgufta hurinteeda lagu eedeye.
Waxaa xusid mudan, in gudoomiyihii ururka OFC iyo xubno kale oo muhiim ah ay Itoobiya xabsiga dhigtay iyada oo lagu eedeye inay gacmaha kula jiraan falal argagixiso ah. OFC ah ayaa ururka kaliya ee ku dhiirada inay ka hadlaan gudaha Itoobiya islamarkaana dhaleeceeya siyaasada dawlada.
Docda kale, bulshada ku dhaqan DDSI iyo qurba-joogtiisa ayaa si hoose u hadal-haya coolada magacooda lagu galay iyo raadka ay ku yeelan karto. Muwadcan ayaa ahaa mid si qarsoon looga doodo 4-ta toddobaad ee ugu danbeesay iyada oo siyaabo kala duwan loo fasirtay waxa keenay gulfka cusub.
In Jeel La dhiso ama Maxkamad Dhagax la dhigo Sow Horta kama Horeeyso in Saylac... Ruushka Oo Bilaabey Ol’ole Joogto Ah Oo Uu Ku Jabsanayo Kombiyuutarada...